नांगा साबुनविरुद्ध युनिलिभरको नांगो विज्ञापन Globe Nepal News Portal
नांगा साबुनविरुद्ध युनिलिभरको नांगो विज्ञापन
Globe Nepal 2017-01-30
काठमाडौं । खोलबिनाका साबुनले जनस्वास्थ्यमा हानी पुग्छ भन्दै पत्रिकामा फुल पेज विज्ञापन दिने कम्पनी भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर रहेको खुलासा भएको छ ।
हालै युनिलिभरको तर्फबाट भारत केन्द्र रहेको बहुराष्ट्रिय विज्ञापन एजेन्सी थम्पसनको नेपाली शाखा थम्पसन नेपाल प्रालीले प्रकाशन गर्न लगाएको यस क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । खोलबिनाको साबन उत्पादन गर्ने हिमगिरी सोप एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिजका कार्यकारी निर्देशक महेश जाजु भन्छन्, ‘त्यस्तो विज्ञापन प्रकाशित गरेर उपभोक्तामा भ्रम छर्ने को हो भनेर त प्रेस काउन्सिलले पनि प्रश्न गरेको सुनेँ । स्वदेशी उद्योग माथिको आक्रमणका रुपमा मैले यो प्रकरणलाई लिएको छु ।’
खोलबिनाका साबनको कुनै लभेल नहुने भएकोले युनिलिभरको विज्ञापनमा ‘लेभल चाहिन्छ लेभल’ भनेर विज्ञापन गरिएको थियो । तर विज्ञापन दिनेको भने कुनै नाम थिएन । अर्काको लेभल चाहिनेले आफ्नो लेभल राख्नु पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न धेरैले उठाएका छन् ।
जनहितका नाममा युनिलिभरले सार्वजनिक गरेको विज्ञापन दिनेको नाम नभएपछि प्रेस काउन्सिलले पनि विज्ञापन प्रकाशित गर्ने पत्रिकाहरुलाई पत्र काटेको छ ।
प्रेस काउन्सिलको पत्रमा लेखिएको छ, ‘विज्ञापनको विश्वसनीयताको लागि विज्ञापन दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत सम्प्रेषित उक्त विज्ञापनबाट पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ४, ५, ७ र ८ उल्लंघन भएको हुँदा विज्ञापन दिने व्यक्ति र संस्थाको नाम उल्लेख नगरी विज्ञापन सम्प्रेषित नगर्न नगराउन हुन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरुलाई प्रेस काउन्सिल नेपाल सचेत गराउँदछ ।’
उक्त रंगिन विज्ञापन प्रकाशित भएको तर कसले दिएको भन्ने नखुलेकोले काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेको हो ।
जानकारहरुका अनुशार सामान्यतः साबुनमा एनिमल टेलो अर्थात पशुको बोसो मिसाइएको हुन्छ । कुन साबुनमा बोसो मिसाइएको छ कुनमा छैन भन्ने परीक्षण गर्ने प्रविधि जटिल हुन्छ । यसकारण पनि साबुनमा बोसो मिसाएको दाबी प्रमाणित गर्न कठिन छ ।
नेपालमा २५ वटा जति उद्योगहरु छन् जसले खोल बिनाका साबुन उत्पादन गर्छन् । खोल भएका साबुनमा बोसो नहुने तर खोल बिनाका साबुनमा बोसो हुन्छ नै भने झै गरी विज्ञापन गर्नुको मतलव स्वदेशी उद्योगमाथि आक्रमण गर्न खोज्नु हो –हिमगिरी सोपका कार्यकारी निर्देशक जाजु भन्छन् ।
उपभोक्तावादीहरुले भने यो लडाई बोसो र केमिकलबीचको भएको बताउँछन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘नेपालका कतिपय उद्योगले साबुनमा बोसो मिसाउँछन् । भारतीय कम्पनीले केमिकल । अब नेपाली उत्पादनमा बोसो हुन्छ भनेर हल्ला गरिदिएपछि धर्ममा आस्था राख्नेहरुले स्वदेशी साबुन प्रयोग गर्दैनन् । धर्ममा प्रहार गरेर आफ्नो सामान बेच्ने विदेशीहरुको चाल हो ।’
अध्यक्ष बानियाँका अनुशार साबुनमा बोसो मिसाउँदैमा हानी केही पनि हुँदैन । तर केमिकल हानीकारक हुन सक्छ । किनभने बोसोको साइड इफेक्ट केही पनि हुँदैन । त्यसमाथि कपडा धुने साबुनको त झनै हुँदैन ।
युनिलिभरका साबुन यति खतरनाक
भारतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभरले ‘नांगा साबुनमा बोसो हुन्छ, यस्तो साबुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ’ भन्दै पत्रपत्रिकामा विज्ञापनका माध्यमबाट दूष्प्रचार गरिरहेको छ ।
सम्भवतः युनिलिभिरले नेपालमा कुनै लुगाधुने साबुन निकाल्दैछ । त्यसो त उसका नुहाउने साबनहरु पनि छन् । साबुनमा बोसोे मिसाएर वा नमिसाइ पनि उत्पादन हुने गर्छ । धार्मिक बिषयवस्तु नल्याउने हो भने बोसोको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन । तर बोसो नमिसाई तयार पारिने साबुनमा रहेका केही रसायनहरुको भने साइड इफेक्ट हुन्छ ।
जस्तो कि साबुनमा कास्टिक सोडा, उच्च पिएच लेभलले छालालाई हानि गर्छ । युनिलिभरले बासो हुन्छ भन्दै नेपालका स्वदेशी साबुन उद्योगमाथि धावा बोले पनि उ आफैले उत्पादन गर्ने साबुनमा भने हानिकारक हुन सक्ने सम्भावना छ । किनभने सबैजसो साबुनमा त्यस्ता हानिकारण रसायन राखिएको हुन्छ । युनिलिभिरका केमिकलयुक्त उत्पादनका पनि साइड इफेक्ट नहुने भन्ने हुँदैन ।
बोसो नभएका तर केमिकलयुक्त साबुनका तीन खतरनाक प्रभाव
१. कास्टिक सोडाः केमिकलयुक्त साबुनले विशेषगरी छालामा हानी गर्छ । साबुनमा भएको कास्टिक सोडाले छालामा नराम्ररी हानी पुर्याउँछ । यो यस्तो केमिकल हो जस्ले फलामको बाहिरी सतहमा टाँसिएको कडा लेयर पनि हटाउन सक्छ । त्यस्तो केमिकल साबुनमा हालिएको हुन्छ । सामान्यत कास्टिक सोडा पुराना गाडी, धातु सफा गर्न प्रयोग हुन्छ । फलाम सफा गर्नेले छाला सफा गर्दा के होला ? आफै अनुमान गर्नुहोस् ।
उदाहरणका लागि तपाईले साबुनले नुहाएर घाममा बस्नु भयो भने छालामा एक खाले सेतो देख्नु हुनेछ । त्यसलाई नङले हल्का कोर्नुहोस् । त्यसबाट सेता पदार्थको एक पत्र सजिलै देख्नु हुनेछ । त्यो पत्र भनेकै कास्टिक सोडा हो ।
२. प्राकृतिक तेलः शरिरले छालाको विशेषतालाई बचाई राख्न एक किशिमको प्राकृतिक तेल उत्पादन गरिरहेको हुन्छ । जुन छालाका मसिना प्वालहरुबाट निस्कन्छन् । यसले छालामा एक किशिमको तैलीय अवस्था बनाइराख्छ । तर साबुनले छालाका लागि चाहिने यस्ता तेल सबै हटाइदिन्छ । र छालालाई पूरै सुख्खा बनाउँछ । यो छालाका लागि बेफाइदा हो ।
३. उच्च पिएच लेभलः पिएच लेभल भन्नेको पोटेन्सियल अफ हाइड्रोजन हो । अर्को अर्थमा एसिडको मात्रा हो । मान्छेको हनुहारमा एसिड आक्रमण भएको त हामीले सुनेकै छौं । त्यो एसिड र कागतीको रसमा हुने एसिड उस्तै उस्तै हो । एसिडको लेभल मात्रै फरक हो । कडा एसिडले छाला जलाउँछ । नरमले कम प्रभाव पार्छ । तर साबुनमा पिएच लेभल उच्च हुन्छ । जुन छालाका लागि हानिकारण मानिन्छ । छालामा रहने उपयोगी अन्य एसिडहरुको लेयरहरुलाई साबुनमा भएको उच्च पिएचले हटाइ दिन्छ । जुन छालाका लागि हानिकारण हुन्छ ।
त्यतिमात्रै होइन बोसोको विरुद्ध प्रचार गर्ने युनिलिभर जस्ता उद्योगले उत्पादन गर्ने साबुनका अन्य बेफाइदा पनि हुन्छन । कतिपय अवस्थामा छालामा रहने भिटामिनलाई समेत केमिकल साबुनले हटाइदिन्छ ।